तेस्रो धारको एमालेमा भयो हार, माधव नेपालको पार्टीमा जाने तयारी ! – GALAXY
तेस्रो धारको एमालेमा भयो हार, माधव नेपालको पार्टीमा जाने तयारी !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले २०७५ जेठ २ जस्ताको त्यस्तै दोहोरिए नआउने प्रष्ट पारे पछि एमालेका तेस्रो धार भनीएकाहरु माधव नेपालको पार्टीमा जाने संकेत गरेका छन्। माधव नेपाल छाडेर एमालेमा बसेका नेताहरुले जेठ २ अनुसार १० बुँदे सहमति कार्यन्वयनको कुरा गरिरहेका बेला महासचिव पोखरेलले जस्ताको त्यस्तै नहुने बताए ।